Siyaasi Golayaasha Qaranka Sida Wakiilada, Guurtida Iyo Dawladaha Hoose Ugu Baaqay In Ay Xilka Banneeyaan Inta Aanay Umaddu Xafiisyadooda Ugu Soo Daadan | Biyoguurenews.com
Home Wararka Siyaasi Golayaasha Qaranka Sida Wakiilada, Guurtida Iyo Dawladaha Hoose Ugu Baaqay In...
Siyaasi Golayaasha Qaranka Sida Wakiilada, Guurtida Iyo Dawladaha Hoose Ugu Baaqay In Ay Xilka Banneeyaan Inta Aanay Umaddu Xafiisyadooda Ugu Soo Daadan
Waxa Uu Golayaasha Qaranka Sida Wakiilada, Guurtida Iyo Dawladaha Hoose Ugu Baaqay In Ay Xilka Banneeyaan Inta Aanay Umaddu Xafiisyadooda Ugu Soo Daadan
Siyaasi Cabdiqaadir Cali Obsiiye (Madaxweynaha Mustaqbalka) oo ka mid ah siyaasiyiinta waaweyn ee Somaliland ee sida qaalibka ah ka hadla hadla wadciga iyo xaaladda markaa taagan bulshadana ku guubaabiya wixii dantoodu ku jirto ayaa si adag u dhaliilay Golayaasha sharci-dejinta iyo xukuumadda ee baas gareeyey xeerka Kufsiga iyo tacadiyada Jinsiga ah oo uu ku tilmaamay nasiib darro innagu dhacday oo innagu keeni karta cadho ILAAHAY SWT, halka uu Golayaasha labada aqal ee Wakiilada iyo Guurtida ugu baaqay in ay meesha banneeyaan oo umadda ka hor dhaqaaqaan haddiiba ay masuuliyadda darrada intaasi le’eg ku kacayaan.
Siyaasi Cabdiqaadir Cali Obsiiye oo warbaahinta la soo xidhiidhay isaga oo wakhtigan ku sugan Caasimadda waddanka Cummaan ee Masqad oo uu hawlo shaqo u joogo ayaa waxa uu sheegay oo xukuumadda iyo golayaasha ugu baaqay in aan xeerkaasi dib loo soo sixin ee gabi ahaanba daaqadda laga tuuro isaga oo sheegay in Golayaasha Baarlamanka iyo Dawladaha Hoose meesha banneeyaan inta aanay shacabku ugu soo daadan ee aanay shaadhadhka soo qaban.
Siyaasiga oo arrimahaasi ka hadlayaa waxa uu yidhi: “Waxaan doonayaa in aan halkan kaga hadlo arrinka ku saabsan xeerka Kufsiga iyo Tacadiyada Jinsiga ah ee maalmihii ugu dambeyey umaddu ka hadlaysay. Arrinka xeerkaasi waa ayaan darro weyn oo innagu habsatay. Waxa nasiib xumo ah in umaddii oo soo wada taagay oo dadkii shacabka ahaa ee u igmaday talada iyo xukunka haddii ay tahay xukuumadda iyo haddii ay tahay Golayaasha qarankaba ay si durduro leh ku ansixiyeen wax aan runtii hore uga dhicin waddankeena Somaliland oo ah waa arrin la odhan karo waa nasiib darro weyn oo innagu dhacday. Waa wax runtii la odhan karo waxa ka dhalan kara cadho ILAAHAY SWT oo keeni karta in umaddani mar kale ubadkooda afka ku qaataan oo ay dib innoo soo marto wixii hore innoo soo maray Ilaahay innooma keenaa haddana waa wax dhici kara in Imtixaan la ina mariyo oo ka dhasha arrinkaasi. Waxaa masuuliyiinteenu ku dhaqaqeen waan ka murugoonaynaa waanan ka xunnahay waxaanan leenahay Ilaahow ha noo qaban waxa ay sameeyeen qaar sufaho ah oo naga mid ahi. Ilaahow hannoo qabanin kuwa wax ma garatada ahi dunuubta ay sameeyeen Rabbow hannoo qaban oo umadda noo badbaadi oo dalka noo badbaadi. Ducadaasi ayaynu kaga ducaysanaysaa wixii ay qoomkaasi sameeyeen”.
“Marka labaad waxaan baaq u dirayaa dhammaan golayaasha qaranka haddii ay tahay sharci dejinta, haddii ay tahay dawladaha Hoose, haddii ay tahay, haddii ay tahay Guurtida oo ah aqalka sare ee Baarlamanka iyo haddii ay tahay xukuumaddaba oo ah Golaha Fulinta ah waxaan leeyahay waar waxaad samayseen wax aad argagax u leh, wax naga nixiyay oo ah wax Runtii Rabbi SWT cadho galinaya oo ah in la faro galiyo arrimihii shareecada Islaamka. Walaalayaal Xeerkaasi dhibaato badan baa ka muuqata oo dhaawac u gaystay shareecadeenii xaniifka ahayd. Waxa lagama maarmaan ah in gabi ahaanba la laalo oo lagu soo noqdo wixii arrimahaasi uu ka dhigayo sharcigeena rasmiga ahi oo ah diinteenna Xaniifka ah ee toosan”.
Ugu dambayn Siyaasi Cabdiqaadir Cali Obsiiye (Madxweynaha Mustaqbalku) waxa uu dhammaan ugu baaqay Bulshada gaar ahaan inta dabada ka riixaysay xeerkaasi haddii ay tahay Hay’adaha caalamiga ah iyo kuwa maxaliga ahna in ay ka waantoobaan oo umadda hagardaamada ka daayaan. Halka uu Madaxweynaha dardaaran adag u soo sheediyey oo uu ugu baaqay in uu dib arrinkaasi ka saxo oo aanay u dhicin in aanu si dhib yar isaga saxeexin oo u il duufin xeer ama sharci masiiri ah oo umadda dhaqankeeda iyo diinteeda taabanaya. Halka uu sidoo kale Golayaasha Guurtida iyo Wakiilada ugu baaqay in ay meesha banneeyaan oo ay umadda ka hor dhaqaaqaan inta aan la gaadhin wakhtigii shacabku shaadhadhka soo qaban lahaayeen, haddii ay ku fashilmeen intii yarayd ee ay u xil saarnaayeen isaga oo ku canaantay in xeerkaasi iyo wax la mid ahi gacantooda ka soo baxo. Muddo dhaafka ay ku fadhiyaanna yahay mid xaaraan ah.
Previous articleDaawo, Waxaanu Casuumi Doona Siyaasyiin Soomaali ah , Masii Eegan karno xaalada sooaamliayada koonfureed,Eng faysal cali waraabe oo waraysi Khatar ah BBC da siiyay
Next articleProf:Ismaaciil Maxamuud Hurre Buubaa, oo ka mid ah Siyaasiyiinta Somaliland, iyo masuuliyiinta Xisbiga Waddani, ayaa ka hadlay aragtidiisa ku waajahan xidhiidhka la sheegay inuu Sucuudigu doonayo inuu la yeesho Somaliland iyo amuuro kale.